Previous Article Gọvanọ Obianọ Enyena Ndị Otu Asọm Mpi Steeti Anambra Onyinye Ego
Next Article Gọọmenti ala Naịjiria na ndị nkuzi mahadum na-akpa ụbụbọ
Ka ọ na-ekwu okwu na ya bụ mmemme inyefe akwụkwọ ndị ahụ n'aka ụlọ ọba akwụkwọ ahụ, bụ nke a maara dịka "Prof. Kenneth Dike Central E-Library" n'Awka; n'aha onye isi mpaghara 9142 ahụ, bụ Dọkịnta Emma Udeh-Akpeh, osote ya bụ Ọkammụta Michael Okikpo kwuputara na atụmatụ ahụ so n'ụtụ nke ya bụ otu na-atụnye n'ịkwalite ezi ọnọdụ mmụta na agụm akwụkwọ n'ogogo dị iche iche n'ala Naịjiria.
Maazị Udeh-Akpeh kwuputanworo ịgbasi mbọ ike nke otu ahụ n'inyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka, ma sịkwa na ha ga na-aga n'ihu n'ịrụ ya bụ ọrụ obi ebere.
Ụfọdụ ndị selitere isi n'otu ahụ, nke gụnyere Maazị Amobi Adịrịka na Uche Akpakama kọwara otu 'Rotary Club' dịka otu na-adịghị achọ uru ego, ma kpọpụtagasịkwa ọtụtụ ihe dị iche ya bụ otu megoro nakwa ụfọdụ atụmatụ ndị ọzọ ha ji n'aka.
N'okwu nke ya, onye isi otu jikọtara ụlọ ọba ego dị iche iche n'ala Naịjirịa, ngalaba nke Anambra, bụ Dọkịnta Uju Nwaforizu toro ndị otu a n'ihi ezi nzọpụ ụkwụ ahụ n'ikpochalata amaghị akwụkwọ ma kwalitekwa ezi ọnọdụ agụm akwụkwọ n'ala anyị, ma kpọkuzie ndị nne na nna ka ha nye aka jalie ụmụ ha iji wee kete oke na ya bụ uru amamihe site n'ịga n'ụlọ ọba akwụkwọ ahụ na ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ dị iche iche agụ akwụkwọ na mgbe na mgbe.
N'ozi ekele ya, onye nọgodi dịka onye isi ụlọ ọba akwụkwọ ahụ, bụ Nwaada Nkechi Udenze kwupuuru ma tokwa ndị otu ahụ banyere ezi atụmatụ ahụ, ma rịọkwazie ndị nne na nna ka ha nye aka n'ịkwalite ọnọdụ mmụta n'ebe ụmụ ha nọ n'ihi na ọ dịrịghị naanị ndị nkụzi, kama, ọ bụ ọrụ dịịrị mmadụ niile.
Ihe pụtakarịchara ihe na mmemme ahụ bụ inyefegasị akwụkwọ ọgụgụ ahụ n'aka ndị isi ụlọ ọba akwụkwọ ahụ bụ "Kenneth Central E-Library" site n'aka ndị otu ahụ.